Wasiirka Boostada & Isgaarsiinta oo soo gabagabeeyay socdaal uu ku tegay Puntland- (sawirro). | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiirka Boostada & Isgaarsiinta oo soo gabagabeeyay socdaal uu ku tegay Puntland-...
Wasiirka Boostada & Isgaarsiinta oo soo gabagabeeyay socdaal uu ku tegay Puntland- (sawirro).
Wafdi uu hoggaaminayay Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyada, Md. Eng Cabdi Cashuur Xasan, ayaa soo gabagabeeyay safar shaqo oo uu ku tegay magaalooyin ka tirsan Puntland.
Previous articleAgaasimaha HS&J Col.Kofi oo tababar u soo xiray madaxda waaxeedyada HS&J (sawirro).
Next articleGuddoomiyaha G/Banaadir oo dhagax dhigay xarunta degmada Wadajir oo muddo burbur-saneyd+Sawirro